Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6 Daraasado ku xiran ilaha xogta waaweyn
Xiriirinta sahaminta ilaha xogta waaweyn waxay kuu sahleysaa inaad soo saarto qiyaaso kuwaas oo aan macquul aheyn ilaha xogta shakhsiga ah.
Sahamooyinka intooda badani waa kuwo kali ah, dadaal iskood u gooni ah. Kama dhisaan dhinac kasta, mana ka faa'iidaystaan ​​dhammaan xogaha kale ee ka jira adduunka. Tani waxay isbeddeleysaa. Waxaa jira wax aad u badan in la helo iyada oo la isku xirayo macluumaadka rayi ururinta ee ilaha xogta waaweyn ee looga hadlayo cutubka 2aad. Iyadoo la isku darayo labadan nooc ee xogta, badanaa waa suurtogal in la sameeyo wax aan macquul aheyn midkoodna qof ahaan.
Waxaa jira dhowr siyaabood oo kala duwan oo xogta sahanka lagu dari karo ilaha xogta waaweyn. Qaybtaan, waxaan ku sharxi doonaa laba qaabood oo waxtar leh oo kala duwan, waxaanan ku magacaabi doonaa su'aalo weydiin ah oo la weydiiyay (jaantus 3.12). Inkasta oo aan dooneyno in aan u muujiyo qaab kasta oo leh tusaalooyin faahfaahsan, waa inaad garatid in kuwani ay yihiin cuntooyinka guud ee loo isticmaali karo noocyada kala duwan ee xogta sahanka iyo noocyada kala duwan ee xogta weyn. Dheeraad ah, waa inaad ogaataa in mid kasta oo ka mid ah tusaalooyinkan loo arki karo siyaabo kala duwan. Ka fekeridda fikradaha ku jira cutubka 1, dadka qaarkood waxay u eegi doonaan daraasaddan sida tusaale ahaan xogta "baaritaanka" ee xogta "kobcin" xogta ballaaran, "kuwa kale waxay u eegi doonaan inay yihiin tusaale ahaan" diyaar garow "xog ballaaran oo kobciya xogta baaritaanka" custommade ". Waa inaad aragtaa labada aragti. Ugu dambeyntiina, waa inaad ogaataa sida tusaalooyinkani caddaynayaan in baaritaannada iyo ilaha xogta waaweyn ay yihiin kuwo dhameystiran oo aan beddelin.
Jaantuska 3.12: Laba siyaabood oo lagu dhajiyo ilaha xogta iyo xogta sahanka. Su'aasha hodan ah (qaybta 3.6.1), ilaha xogta weyni waxay leedahay cabbir weyn oo xiiso leh iyo xogta sahanku waxay dhistaa xuruufta lagama maarmaanka ah. Weydiinta weydiinta (qaybta 3.6.2), ilaha xogta ee weyni ma laha cabbir weyn oo xiiso leh, laakiin waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo xogta sahanka.